အဘယ်အရာနှင့်မည်သို့ပေါက်ကွဲ cyclogenesis ဖွဲ့စည်းသည် | ကွန်ယက်မိုးလေဝသ
အဘယ်အရာနှင့်မည်သို့ပေါက်ကွဲ cyclogenesis ဖွဲ့စည်းသည်
ဂျာမန် Portillo | | ဆိုင်ကလုန်းများ
ဆောင်းရာသီများစွာတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်တွင်ကြီးမားသောပျက်စီးမှုဖြစ်စေသောအလွန်ပြင်းထန်သောမုန်တိုင်းများကိုခံစားခဲ့ရသည်။ မိုးလေ ၀ သပညာရှင်များကဤမုန်တိုင်းအမျိုးအစားများကိုကြေငြာခဲ့သည် တစ် ဦး ပေါက်ကွဲ cyclogenesis ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ Cyclogenesis ဆိုတာဘာလဲ? ၎င်းသည် "ပေါက်ကွဲစေတတ်သော" ဖြစ်လျှင်မည်သို့မှီခိုသနည်း။
ဒီဆောင်းပါးမှာ cyclogenesis အကြောင်းလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ သင်စာဖတ်ခြင်းကိုသာပြုလုပ်ရမည်
1 ပေါက်ကွဲ cyclogenesis ကဘာလဲ?
ပေါက်ကွဲ cyclogenesis ကဘာလဲ?
ဒီအယူအဆကိုနားလည်ရန်ဆိုင်ကလုန်းဆိုတာဘာလဲ။ ဤရွေ့ကားအနိမ့်ဖိအားဒေသများဖြစ်ကြသည် မြောက်ဘက်ခြမ်းရှိလေသည်နာရီလက်တံလည်ပတ်ရာနေရာဖြစ်သည်။ အားလုံးမိုးကြိုးသို့မဟုတ်စိတ်ကျရောဂါအားလုံးသူတို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစဉ်အတွင်း cyclogenesis အချို့ပုံစံခံယူ။ ကန ဦး အဆင့်များတွင်၎င်းတို့သည်အအေး၊ ပူနွေးမှုနှင့် ၀ ိုင်းရံထားသောရှေ့စနစ်များဖြင့်လှိုင်းပုံစံဖြင့်ဖွဲ့စည်းသည်။ လေထုဖိအား၏နိမ့်ဆုံးတန်ဖိုးသည်၎င်း၏သက်တမ်းစက်ဝိုင်း၏ပထမပိုင်းတွင်လျော့ကျသွားသည်။
အခြေခံအားဖြင့်ပေါက်ကွဲနိုင်သော cyclogenesis ဖြစ်သည် အလွန်လျင်မြန်စွာနှင့်ပြင်းထန်စွာဆိုင်ကလုန်း၏ဖွဲ့စည်းခြင်း။ ဆိုလိုသည်မှာမျက်နှာပြင်ဖိအားကျဆင်းခြင်းဖြစ်သည် အချိန်တိုတောင်းသောအာကာသ၌တည်၏။ ၎င်းသည်နာရီပိုင်းအတွင်းအလွန်ပြင်းထန်သောအကြမ်းဖက်မှုသို့ကျရောက်စေသည်။ ဤအလွန်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းနက်ရှိုင်းသောစိတ်ကျဆင်းမှုများအတွက်အသုံးပြုသောအထွေထွေဝေါဟာရသည်မိုးလေ ၀ သဗျူဟာဖြစ်သည်။
ပေါက်ကွဲ cyclogenesis ၌တည်၏ လေထုဖိအားသည် 24 mb ထက်ပိုသောသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသောလျော့နည်းစေသည်။ ၎င်းသည် ၅၅ နှင့် ၆၀ ဒီဂရီအကြားရှိလတ္တီတွဒ်များတွင်ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ အကြောင်းမှာ cyclogenesis ၏ဖြစ်စဉ်များသည်ကမ္ဘာ၏လည်ပတ်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်အတ္တလန္တိတ်နှင့်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာများတွင်အများဆုံးတွေ့ရသည်။
ထိုကဲ့သို့သောအရွယ်အစားတစ်ခု cyclogenesis ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းများအတွက်ရှင်းပြချက်ဖြေဆိုရန်မလွယ်ကူပါ။ လတ္တီတွဒ်ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ ဒီ caliber တစ်ခု pump ကိုထုတ်လုပ်ရန်အတွက်ပိုမိုမြင့်မားသောအခြားအဆင့်များနှင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်မုန်တိုင်းသည်အချိန်မီနှင့်တစ်ပြိုင်တည်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်။ သူတို့အနေဖြင့်လုံလောက်သောအကွာအဝေးတွင်ရှိရမည်ဖြစ်ရာ၎င်းတို့အကြားစိတ်ဓာတ်ကျမှုစနစ်ကိုနက်ရှိုင်းသောသို့မဟုတ်တိုးချဲ့ရန်အချိန်တိုအတွင်းတွင်ဖြစ်စေ။
လူများစွာ သူတို့ကမကြာခဏဟာရီကိန်းသို့မဟုတ်တိုင်ဖွန်းအတွက်ပေါက်ကွဲ cyclogenesis မှားယွင်း။ သူတို့ကဒါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ Cyclogenesis သည်လတ္တီတွဒ်အလယ်ပိုင်းနှင့်သာအပူပိုင်းဒေသဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းများတွင်ဖြစ်ပွားသည်။ ရုပ်ရှင်တစ်ကားအတွက်နာမည်ကောင်းရှိပေမယ့်သူတို့ပြောသလိုပြီးပြည့်စုံတဲ့မုန်တိုင်းမဟုတ်ပါဘူး။
စပိန်တွင်၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လတ္တီတွဒ်တွင် ပိုမို၍ ရှားပါးသော်လည်းမကြာခဏဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ၎င်းကိုသင်၏လျင်မြန်စွာနားလည်နိုင်ရန်အတွက်နက်ရှိုင်းသောမုန်တိုင်းဟုခေါ်တွင်နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်း၏လေများမှာအလွန်ပြင်းထန်သောကြောင့်လေပြင်းတိုက်ခတ်လုနီးပါးဖြစ်နေပြီ။ ပင်လယ်ရှိမုန်တိုင်းသည်သာမန်မုန်တိုင်းထက် ပို၍ ပြင်းထန်သောကြောင့်များသောအားဖြင့်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းသည်အလွန်နက်ရှိုင်းသည်ဟုအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သောကြောင့်ပေါက်ကွဲစေသည့်ဝေါဟာရကိုထည့်သွင်းထားသည်။
ဤဖြစ်စဉ်ကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစေခြင်းနှင့်ပိုမိုပြင်းထန်လာခြင်းတို့ကြောင့်မုန်တိုင်းများအကြားခြားနားချက်များရှိသည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီပြင်းထန်မှုကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မမြန်ဘူး။ ပေါက်ကွဲ cyclogenesis ခုနှစ်, ကဖွဲ့စည်းသောလုပ်ငန်းစဉ်များ၏ဒိုင်းနမစ်မြင့်မားသောအရှိန်နှင့်အငြိုးတကြီးနဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းသည်မိုးလေ ၀ သနှင့်ဇီဝကမ္မဗေဒ၏ထူးခြားသောအရာဖြစ်သည်။
မိုးလေ ၀ သနှင့်ဇလဗေဒအရပြောရလျှင်၎င်းကို၎င်းကိုအခြားနည်းလမ်းဟုခေါ်ရန်လိုအပ်သည်။ သူတို့ကိုဤနည်းဖြင့်အမျိုးအစားခွဲထားသည် အလွန်အမင်းဆိုးရွားသောဆိုင်ကလုန်းအနှောင့်အယှက်များကိုသတိပေးရန်နှင့်ဆွဲဆောင်ရန် နှင့်အထူးဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အတူ။
ထို့ကြောင့်ပေါက်ကွဲသောပေါက်ကွဲသံသည်အလွန်နက်ရှိုင်းသောမိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်းဖြစ်သော်လည်းအခြားတစ်ဖက်တွင်မူမဟုတ်ပါ။ ဤဖြစ်စဉ်သည်နာရီအနည်းငယ်သာကြာသောကြောင့်ခန့်မှန်းရန်အလွန်ခဲယဉ်းသည်။ လူတစ် ဦး အနေဖြင့်ဤဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုကြိုတင်သိထားရန်ကြိုတင်စည်းကမ်းချက်များမရှိပါ။
ယေဘုယျအားဖြင့်သတင်းအချက်အလက်သိပ်မရရှိနိုင်သည့်ရေကြောင်းဒေသများတွင်ပေါက်ကွဲစေနိုင်သောဆိုင်ကလိုဂျင်စီစနစ်ဖြစ်ပေါ်သည်။ အားလုံးမော်ဒယ်များအခြေအနေများကောင်းစွာရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်ပါတယ်။ သင်သည်မှားယွင်းသောသို့မဟုတ်ချွတ်ယွင်းသောကန ဦး ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုမှစတင်ပါကဤဖြစ်စဉ်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ထို့အပြင်လုံလောက်သော Spatial Resolution ရှိသည့်ကိန်းဂဏန်းများကိုအသုံးပြုရမည်။ ဆိုလိုသည်မှာအသေးစားဖြစ်ရပ်များကိုပြန်လည်ထုတ်လွှင့်နိုင်ရန်အတွက်ကြီးမားသောအတိုင်းအတာတစ်ခုနှင့်ဒေသတွင်း၌တစ်ချိန်တည်းတွင်လုပ်ကိုင်ရန်လုံလောက်သောပွင့်လင်းမှုရှိရမည်။
ကြိုတင် cyclogenesis မျိုးပွားနိုင်စွမ်း operating မော်ဒယ်များ သူတို့ကအရမ်းရှားပါတယ်။ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်တိုးတက်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက်မော်ဒယ်အားလုံးနီးပါးက၎င်းကိုထင်ဟပ်ပြသည်။
ပေါက်ကွဲ cyclogenesis ဆင်တူမိုးလေဝသဖြစ်ရပ်ရှိပါတယ်။ သူတို့ထဲကတစ်ခုမှာ၏ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့သည် Gordon ကမြင်ပါတယ် ဂါလီစီယာနှင့်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသကိုတိုက်ခတ်သောလေပြင်းများအလွန်ပြင်းထန်သည်။ သို့သော်ထင်သည်အတိုင်းသူတို့သည် cyclogenesis မဟုတ်ပါ။ လေထုထဲတွင်အခြေအနေများစွာရှိပြီးပြင်းထန်သောလေများနှင့်ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းများကိုနည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အသေးစား (လေဆင်နှာမောင်း) မှအကြီးစားအထိ (ဟာရီကိန်းနှင့်ပေါက်ကွဲသောမုန်တိုင်းများ) ။ ဒီကျယ်ပြန့်ရောင်စဉ်သို့မဟုတ်အခြေအနေအမျိုးမျိုးကအလွန်ဆိုးရွားသောလေကိုပေးနိုင်သည်။
ဤကိစ္စတွင်ဤလေတိုက်ခဲ့ကြသည် အမျိုးအစား3ဟာရီကိန်း သူတို့သည်ကျွန်းဆွယ်မှအဝေးဆုံးသောအခါ။ ဟာရီကိန်းသည်မြေမျက်နှာပြင်သို့ချဉ်းကပ်သောအခါတဖြည်းဖြည်းအားနည်းလာသည်။ အပူပိုင်းဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းပဲ။ သူ Galicia သို့ရောက်သောအခါအပူပိုင်းဒေသမုန်တိုင်းတစ်ခု၏အေးစက်သောမျက်နှာတစ်ခုကြောင့်ဖမ်းမိခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်းဆွယ်၏အနောက်မြောက်ဘက်သို့မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုပေါက်ကွဲစေနိုင်သောဆိုင်ကလိုဂျင်ဇင်ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်စဉ်မရှိဘဲ၎င်းကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဖြစ်ပျက်သောအခါနောက်ထပ်အလားတူဖြစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့သည် အပူပိုင်းဆိုင်ကလုန်းမြစ်ဝကျွန်းပေါ် 2005 ခုနှစ်။ ဒီဆိုင်ကလုန်းသယ်ဆောင်လာသည့်လေပြင်းများသည်areaရိယာကျယ်ပြန့်သော်လည်းအားနည်းသွားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည်အင်အားနည်းပါးသော်လည်း၎င်းတို့သည်ပိုမိုများပြားသောနေရာများကိုဖြတ်ကျော်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်၎င်းသည်ကန္တာရကျွန်းများပေါ်မှအပူပိုင်းဒေသကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ ဒေသခံနှင့်ပထဝီအနေအထားအရသက်ရောက်မှုများသည်ကျွန်းများပေါ်၌လေကိုအလွန်ပြင်းထန်စေသည်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်မျှ၎င်းသည်ပေါက်ကွဲစေသည့်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုမျှမခံစားရပါ။ ဤအကြောင်းကြောင့်ပင်ဟာရီကိန်း - လေပြင်းများသို့မဟုတ်အလွန်ပြင်းထန်သောမုန်တိုင်းများနီးပါးကိုပေါက်ကွဲစေနိုင်သောဆိုင်ကလိုဂျင်စီစနစ်နှင့်ရောထွေးလေ့ရှိသည်။
ဒီသတင်းအချက်အလက်နဲ့ဆိုင်ကလိုဂျင်နီးစ်ပါ ၀ င်မှုဖြစ်စဉ်များနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများဟာအလွန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာပြီး၎င်းကိုရှုပ်ထွေးနေသူများကိုကျွန်ုပ်တို့ပြင်ပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ သင်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်နှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများရှိပါကမှတ်ချက်များတွင်မထားပါနှင့်။ ငါပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ် answer
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေ ၀ သဖြစ်ရပ်များ » ဆိုင်ကလုန်းများ » အဘယ်အရာနှင့်မည်သို့ပေါက်ကွဲ cyclogenesis ဖွဲ့စည်းသည်